Taliska Meletariga oo cadeeyay in ay Shabaab soo dhaweeyeen ciidankii Kenya ay ka saartay Kismaayo | warsugansomaliya.wordpress.com
Korneel Faarax Cali Guuleed oo ka mid ah saraakiisha Ciidamada Dawlada ee gobolka Jubbada hoose ayaa sheegay inay soo dhaweyn wacan kala kulmeen Shabaabka kusugan duleedka Kismaayo kadib dagaalkii Kismaayo looga saaray isbuuc kahor.
“Innaga waxaa soo dhaweyn noo sameeyay Shabaabka deegaankaan oo nasiiyay dhul aan degno oo aan ku noolaanno kadib markii ay ciidanka Xabashidu naga soo saareen Kismaayo. Shabaab horay dagaal ayaa nooga dhexeeyay hasa yeeshee markii Keenyaatigu innaga nagu soo qasbeen in aan magaalada nafteenna kala soo baxsanno waxaa soo baxday in aan isku cadaw nahay. Shabaabka waxaa nooga daran Keenyaatiga. Shabaabku waa Soomaali hasa yeeshee Kenya waa soo duushay wax ay kuu reebeysana malahan”, Faarax Cali Guuleed ayaa ka dhawaajiyay.
Faarax Cali Guuleed ayaa intaa ku daray,“Shabaab inkasta oo ay deegaan nasiiyeen dagaal nalama gelin hadii ay nagu taageerayaan la dagaalanka ciidanka Kenyana waa soo dhaweyneynaa. cid kasta oo xilligaan gacan nagu siineysa sidii dalka looga saari lahaa sawaaxiliga soo duulay waan garab-saneynaa”.
Ciidanka Kenya dhibaatada ay ku wadaan Soomaalida ayaa waxa ay markaan u muuqataa mid soo dedeji karta in Shabaabka hubeysan qaarkood ay dowlada Soomaaliya ka daayaan dagaalka tirada badan iyaga oo u arka Kenya cadaw dalka Soomaaliya dhan aan wanaag la ogoleyn dagaalka lagula jiraahina uu muqadas yahay mucaarad iyo muxaafadba.
Si kastaba, hadalkaan ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) uu cadeeyay in xilligaan Kenya iyo Shabaab aysan aheyn kuwa lees bar-bar dhigi karo, isaga oo intaa ku daray in Kenya ay cadawga dalka tahay hasa yeeshee Shabaabku ay yihiin Soomali dhanka fikirka lagu kala duwanyahay.
← Wasiirka Madaxtooyada Maamulka Somaliland oo la cadeeyay in uu Shabaab la shaqeeyo (qaabkuu ula shaqeeyaa?)
Maxaad kala Socotaa Lacagta ku baxda Maalintii Qoyska Obama Socdaalkooda Afrika iyo Qaabka loo sugo amaankooda. →